Wararkii ugu dambeeyey xiisadaha colaadeed ee Itoobiya iyo Eritrea – SBC
Wararkii ugu dambeeyey xiisadaha colaadeed ee Itoobiya iyo Eritrea
Iyadoo ay dib u soo cusboonaatey xiisada colaadeed ee ka dhex aloosan wadamada Itoobiya & Eritrea ayaa waxaa soo baxaysa walaaca laga qabo in ay dib u qarxaan dagaaladii wadamadaasi horey u dhexmarey sanadihii 1998 ilaa 2000 kuwaasi oo galaaftey nolasha 70 kun oo qof.
Xiisadan ayaa waxaa dib u soo cusboonaysiiyey ka dib markii ciidamada Itoobiya ay weerar kadis ah ku qaadeen saldhigyo military oo ku yaal gudaha Eritrea kuwaasi oo ay ku sheegtey in lagu tababaro “kooxo argagixiso ah” oo qalqal amaanka ka geystey gudaha Itoobiya sida xukuumada Adis Ababa hadalka u dhigtey.
Laakiin wasiirka warfaafinta Eritrea Ali Abdu ayaa ku tilmaamay duulaanka Itoobiya mid ciyaar la dajiyey ah oo ah ay u bandhigayso beesha caalamka taasi oo uu sheegay inay ku qaldayso qabsashada 10-ka sano ah ee ay haysato dhulka Eritrea, iyadoo dhawaan loo debaaldegayo 10 sano guurada markii loo xukmiyey magaalada Badme inay leedahay wadanka Eritrea.
Abdu wuxuu sheegay inaan Eritrea lagu dhaliili karin hadii ay ku guuldareysatey xukuumada Itoobiya inay xasiliso gudaha wadankeeda dhibaatada ka jirta sida uu hadalka u dhigay.
“Tani waa mid duulaan ah oo ka dhan ah madaxbanaaniada Eritrea” ayuu yiri Abdu oo xusey in sababaha ay u guuldareystey xukuumada Adis Ababa ay tahay sida uu sheegay iyadoo qabaa’ilka yar yar ay muuqinayso isla markaana ay ku wado wax uu ugu yeeray qaybi oo xukun.
Afhayeenka xukuumada Itoobiya Shimeles Kemal aya sheegay in maalinimadii Khamiistii ciidamada Itoobiya ay gudaha u galeen 16 KM gudaha wadanka Eritrea isagoo ku faanay in ciidamadoodu qaadeen “Hawlgal lagu guuleystey”, kuwaasi oo lagu qaaday laba saldhig oo ay adeegsadaan kooxo mucaarad ku ah Adis Ababa.
Go’aankii ugu dambeeyey ee soo baxay 13-kii April 2002 ee gudiga xuduuda Itoobiya & Eritrea ee ay taageeraysay qaramada midoobay wuxuu cadeynayey in magaalada Badme ee lagu dagaalamay sanooyin ka hor ay tahay magaalo ay leedahay Eretria laakiin xukuumada Casmara waxay ku celcelinaysay in Itoobiya ay diiday inay fuliso go’aanka soo baxay.
Wasiirka warfaafinta Eretria oo soo xiganayey arinkaasi wuxuu sheegay in golaha amaanka aanu wali qaadin talaabo ka dhan Itoobiya oo la xiriirta inay iska indho tirto mudo 10 sano fulinta go’aankaasi.
“Waxaynu waydiisanaynay golaha amaanka ee qaramada midoobay inay qaadaan talaabooyin ka dhan arintaasi taliska Itoobiya oo ku xadgudbaya Eritrea iyo gudiga xuduuda Itoobiya & Eritrea” ayuu yiri Ali Abdu wasiirka warfaafinta Eritrea.
Dhinaca kale waxaa loo jeediyey labada wadan in ay isxakameeyaan oo ay ka weecdaan inay galaan dagaalo dheeraad ah oo dhiig ku qabto.
Dawlada Mareykanka waxay ugu baaqadey labada dhinac inay is xakameeyaan, iyadoo waaxda arimaha dibada Mareykanka ay tilmaamtey inay ka doonayso Itoobiya tafaasiil dheeraad ah oo la xiriirta hawlgalkeeda sida ay sheegtey Victoria Nuland oo ah haweenay u hadashey waaxda arimaha dibada Mareykanka.
“Waxaynu maqalnay warbixinta dawlada Itoobiya ee ku aadan in ciidamadeedu ay weerareen saldhigyo military oo ku yaal gudaha Eritrea” ayey tiri Victoria Nuland.
Sidoo kale Bernard Valero oo ah afhayeen u hadley wasaarada arimaha dibada Faransiiska ayaa warsaxafaadeed uu soo saarey wuxuu ku yiri “Faransiisku waxay ugu baaqayaan labada dawladood inay ka fogaadaan colaad military oo cusub si guud, Faransiisku waxay rumaysan yihiin habka kaliya ee lagu xalin karo muranka u dhaxeeya labada wadan in uu yahay wadahadal iyo wadaxaajood.”